Tetikasa 3i :: Hamerina ny hasin’ny fifankatiavana sy ny fihavanana • AoRaha
Tetikasa 3i Hamerina ny hasin’ny fifankatiavana sy ny fihavanana
Tontosa tany Toamasina ny fampahafantarana ilay tetikasan’ny minisiteran’ny Serasera sy ny kolontsaina « Iray Ihany Isika (3I) ». Foto-kevitra ampitaina ny famerenana ny hasin’ny fifankatiavana sy ny fihavanana, izay nampiavaka ny Malagasy.
« Hita taratra fa miha lefy ny fihavanana. Miha manjavona ihany koa ny firaiketam-panahy amin’ny kolontsaina ka nanosika ny minisitera hamerina ilay hasina maha Malagasy amin’ny alalan’ny “3I ». Tsy azo ekena intsony ireo fanavakavahana amin’ny endriny maro, eny amin’ny fiarahamonina », hoy ny minisitry ny Serasera sy ny kolontsaina Rakotondrazafy Andriantongarivo Lalatiana.
« Na inona na inona fahasamihafana dia azo ihoarana izany. Mila ovaina ny fomba fisainana manomboka izao mba hahafahantsika manatratra ny tanjona ho an’ny famerenan-kasina ny kolontsaina. Mila fahatongavan-tsaina avy amin’ny olom-pirenena ny fialana amin’ny fahasamihafan’ny rehetra », hoy hatrany ny fanazavana.
Fanarahana fepetra Manao antso avo amin’ny vahoakan’ i Toamasina i Shyn
Kanto sy krizy Miha sahirana hatrany ireo mpampianatra dihy sy mozika
Lalao an-tsolosaina mampitaintaina :: Maneho tantarana tovovavikely miady amin’ny jiolahy any atsimo ny “Dahalo”